Ungasula kanjani ipeni ephepheni, noma umthetho wesithandathu wobuthakathaka
Zingaki ukungezwani okuvela ekuphileni ngokubhala. Ulimi olungalungile nesilulumagama, izimpawu zokubhala kanye namaphutha esipelingi ... Konke lokhu kusikisela ukuthi kwakudingeka ukutadisha esikoleni. Futhi, uma lesi sikole singenaso isikhathi sokwenza ulwazi lwabo, asikaze siphuze kakhulu. Dare futhi ufeze impumelelo okwamanje. Kodwa umuntu ofundela akulula njengoba kubonakala ekuqaleni. Angenza amaphutha futhi enze "ukungcola" emibhalweni yakhe, izincwadi nezincwadi. Okukhulu, mhlawumbe, okungajabulisi kwezigameko ezifana nalezi kubonakala. "Izingalo ezixubile," isimo esibuhlungu noma ukuthuthumela eminwe? Yebo, cha. Umthetho wesithupha wobuthakathaka - nje ipeni ligeleza. Kanjani manje ukulungisa lokhu ukungaboni kahle nokuhlola indawo engafaneleki, ukususa ipeni ephepheni?
Ake sicabange, kulula yini ukusula i-inkino engadingekile uma ichithwa ephepheni, inothi noma ngaphezulu, idokhumenti esemthethweni, njengepasipoti. Noma amanoni amabili ahlobisa idayari yomfana, futhi manje wesaba ukuya ekhaya. Ibhande elikhuni lesikhumba elinomcengezi wethusi eligijimela ngaphesheya, futhi ubaba othukuthele, ehlile izandla zakhe, ulinde indodana yakhe. Mhlawumbe into yokuqala efika engqondweni ukususa ikhasi elinjalo, bese uzenza sengathi. Futhi ukuthi ungachaza kanjani, bese ufakwa esikhungweni noma esikhungweni sepasipoti, ishidi elivela kudokhumenti liya kuphi? Lesi akusona isisombululo esihle kakhulu, ngakho-ke, le nketho iyanyamalala. Isiyingi sesibili, ukususa ipeni ephepheni, siyazikisela. Kuyinto - ukuphendukela kubachwepheshe noma, njengoba kubizwa, izakhi zobugebengu noma izenzi zobuciko-abazenza. Labo abazimisele ukuthatha umsebenzi futhi bakhiphe irekhodi elimnandi noma libambe. Kodwa! Okokuqala, kuzodingeka ukhokhe imali eningi. Okwesibili, ubeka ingozi yokuwa phansi nomthetho wezenzo zakho. Futhi, okwesithathu, akulona iqiniso ukuthi abadwebi abanjalo bazosusa ngokucacile ukususa ibala le-inki. Lapha, ukugcinwa kwakho nedumela lakho lizohlupheka futhi, futhi ibala lizovela ku-autobiography yakho yonke engacabangeki. Ukhetho lwesibili alufanelekile. Akukho okunye okumelwe kwenziwe, okukhethwa kukho kokugcina ukuzama ukusula wena ipeni lebhola.
Isinyathelo esisodwa. Ukwenza lokhu uzodinga iviniga evamile ka-70% , edayiswa kuzo zonke izitolo ezinkulu nezitolo zokudla. Ibuye idinga izithako ezifana nama-manganese, i- hydrogen peroxide nokupakisha ngama-budton efihlekile, angathengwa kunoma iyiphi ikhemisi edolobheni. Yonke le nhlanganisela iyobiza imali encane nomzamo wakho. Ngemva kokuba izidakamizwa zithengwa, hamba ekhaya bese uqhubekela esiteji sesibili. Uma usuqedile leli phuzu, wena-ke, ngeke ube ngumuntu ongekhohlisayo, kodwa uzoqonda uhlelo oluyisisekelo lokususa ipeni ephepheni. Lapha, nakanjani, kuzomele uzame ukwenza lo msebenzi ngokuhlanzekile nangembile. Tune ngokungathí sina, vala ikamelo elinesihluthulelo noma ukukhiya ukuze ungabanjwa ku-scam. Lungiselela zonke izingxenye ezidingekayo bese uzibeka etafuleni elihlanzekile. Beka idokhumenti yakho futhi, njengodokotela ohlinzayo wangempela, qhubeka ususa isisu.
Isinyathelo ezimbili. Esikhathini somkhumbi okhethekile weglasi, hlanza uviniga kanye ne-potassium permanganate engxenyeni enjalo ukuthi ingxube ibonakala njengombala obomvu obomvu. Le ngxube kufanele ixutshwe kahle, ukuze ama-manganese aqedwe ngokuphelele kuviniga. Kulokhu kuncike, mhlawumbe, ingxenye ebaluleke kakhulu yempumelelo yebhizinisi lakho. Uma kungenjalo iziqu ezivela ku-potassium permanganate, ezawela ephepheni, ziyoyiphatha kalula. Ngemuva kokuthi isixazululo sesilungile, thatha i-swab yekotini, uyidiphe engxenyeni elungiselelwe futhi usebenzise kahle u-tampon endaweni lapho ukuqoshwa noma ibala likhona khona. Akukho cala angeke senziwe phansi ngenduku ngezindlela ezahlukene. Kuyasebenza futhi hhayi okungaphezulu. Inkinobho emibili noma kathathu manzi, udinga ukuwayeka, linde imizuzwana engu-15 - 20. Lapho nje inkino iba i-wiring e-pink, ngokushesha uthathe futhi ubophe i-cotton ehlanzekile yohlobo lwekotini e-hydrogen peroxide futhi usebenzise ngobumnene imivimbo ebomvu yesinamathisela sangaphambili. I-peroxide kumele ichithe indawo lapho ikhishwa lisuswa khona, futhi iphepha lizoba umbala wemvelo. Ngemuva kwalokho, ungafihli idokhumenti noma i-notebook bese uvumela ikhasi ukuthi lome ngokuphelele.
Uma konke kwenziwa ngendlela efanele, khona-ke akufanele kube khona noma yikuphi ukulandelwa kokukhishwa kwe-inki yokufakelwa. Futhi manje uyakwazi ukusula ipeni ephepheni ngendlela ejwayelekile yokubhala. Mhlawumbe, le ndlela yindlela elula kunazo zonke ezinye izinto ezinikeza zona. Ngakho uKusnell no-Elwood, ososayensi eYunivesithi yaseCambridge, baqhuba isipiliyoni sabo sokususa ama-ink stain kusuka kunoma yiliphi iphepha. Kodwa-ke, indlela yabo yinkimbinkimbi futhi idinga imishini ekhethekile. Futhi-ke, uma ucabanga futhi ungazi ukuthi yini okufanele ulethe unamathisele emgqeni wephepheni, ungathokozi, futhi uphinde ulinganise konke okunezinzuzo nezingozi. Izindlela ezingekho emthethweni zingakuholela emiphumeleni emibi. Futhi akuzona ukuthi izindlela ezahlukene zokulahla ziyasebenza futhi zilungile.
Ukubuyiselwa kokugeza ngezandla zakho. Ukubuyiselwa kwebhati nge-acrylic (ukubuyekezwa)